लेजर पद्धतिबाट यसरी गरिन्छ पायल्सको उपचार, हस्पिटल बस्नै नपर्ने ! - दैनिक नेपाल न्युज
पायल्स, निकै कष्टकर समस्या हो । गलत खानपान र जीवनशैलीले निम्त्याउने यो समस्याबाट धेरैजना ग्रसित हुन्छन् । तर, लाजको कारण रोग लुकाउँछन् । जबसम्म समस्याले जटिल रुप लिदैन, तबसम्म उपचार खोजिदैन । मलद्वार र मलाशयका भित्ताहरुमा रहेको रक्तनली सुन्निने र त्यसबाट उत्पन्न हुने विभिन्न समस्या नै पायल्स हो ।
सुरुवाती चरणमा खानपान र जीवनशैली बदलेर यसबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । जटिल अवस्थामा भने शल्याक्रिया गर्नुपर्ने समेत हुनसक्छ । योग, आर्युवेदलगायत परम्परागत उपचार विधीबाट पनि यसको निदान खोज्न सकिन्छ । यसैविषयमा सर्जन डा. विश्वदिप तिमिल्सिनासंग कुराकानी गरेका छौँ । हेर्नुहोस पायल्सको उपचार लेजर पद्धतीबाट कसरी गरिन्छ :
स्थानीयवासी भन्नुहुन्छः उपल्लो डोल्पामा छाक टार्ने अन्न छैन